Go Public, Reverse merger, Companieslọ ọrụ sheel ndị dị
Etu ị ga-esi aga Ohaneze - IPO, Revers Merger, na Shells Public
Publicga n'ihu ọha bụ usoro a na-erere ndị otu ọhaneze ihe na - emebu na nzuzo. Usoro a siri ike, na-achịkwa ya nke ọma ma nwee ọtụtụ uru, na-ewere ụlọ ọrụ gị n'ihu ọha:
Na-enyere gị aka itolite ụlọ ọrụ gị ngwa ngwa site n'inye gị ego ndị ọzọ.
Na-enyere gị aka ịdọrọ ma na-ejigide ndị a ma ama na ụgwọ ọnwa nwere ezi uche (site na nhọrọ ngwaahịa).
Too ụlọ ọrụ gị ngwa ngwa site na ị na-adọta ndị isi nchịkwa nwere ọgụgụ isi, nwee ahụmahụ.
Welie isi obodo ọsọsọ ma jiri ụgwọ dị obere.
Na-abawanye na mmiri gị na ndị na - etinye ego.
Na-emeghe isi obodo ma na -emepụta ngwaahịa ahịa nwere ike iji nweta ụlọ ọrụ ndị ọzọ ma soro ndị ụlọ ọrụ ndị ọzọ nwee mmekọrịta dị mma.
Na - eme ka uto gị dịkwuo elu site n'ịbawanye ikike gị ịsọ mpi maka nnukwu nkwekọrịta.
Nwere ike ngwa ngwa ma dochie uru nke ụlọ ọrụ gị.
Na-etinye ego nke aka gị na azụmaahịa gị site n'ime ka ọ baa uru karịa, si otú a na-abawanye ROI nke gị.
Na - eme ka ọnọdụ azụmahịa gị dịkwuo elu ma si otú a na - eme ka ọ dị mfe ịdọrọ azụmaahịa ọhụrụ.
Ọ bụrụ na ịnwee ụlọ ọrụ ọha na eze, anyị nwere ike inye aka mee ka ụlọ ọrụ gị nwekwuo uru na uru ya ma nyere gị aka ịchekwa akụ site na ikpe.
Buru n’uche; ọ bụghị naanị n'ịzụlite ego. Ọ bụkwa banyere ijide nke ahụ
ụlọ ọrụ ahụ na-eme nke ọma ma na-achịkwa ya. Ndi isi ulo oru ndi ozo n’alu oru maka abamuru nke
ndị na - eketa oke. Buru ezigbo ihe ha n’obi ma ha ga-achọpụta ebumnuche gị, ọtụtụ ndị mmadụ ga-abịakwa nzukọ gị. Ọ bụ ihe dị ogologo ga-eche ihe dị mkpa, ọ bụghị mgbagha nke otu oge. Ga-achọ ụlọ ọrụ ahaziri nke ọma, atụmatụ azụmaahịa dị mma na ndị maara ihe iji mezuo ya. Ma ị nọ na US, Germany, China, Canada ma ọ bụ ebe ọzọ, chọọ anyị maka enyemaka.
Kedu ihe ị chọrọ enyemaka?
Want chọrọ ịbawanye ahịa gị?
Youkwesiri ka ịbelata ọnụ ala?
Wantchoro inweta ahia ndi ozo ma choo ezigbo ndi ochichi?
You chọrọ atụmatụ ahịa ka mma?
Kedu maka mgbasa ozi na ahịa? Chọrọ enyemaka?
You chọrọ ezigbo usoro nkwado na ndepụta nke ndị maara ihe?
Gịnị banyere nchebe pụọ n’aka ndị mmadụ “na-eme ka” akụ gị dị ụkọ?
Chọrọ ịme ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ S&P 500?
Chọrọ ime ka ọha na eze mara aha gị n ’ụzọ dị oke ọnụ?
You chọrọ ịpụ akwa akwa pink ahụ wee banye n'ọnọdụ mgbanwe buru ibu?
Nke a bụ otu esi amalite
Enwere ndokwa ebe ị ga - esi kwado usoro nke “ọhaneze.”
Anabatakwa Visa, MasterCard, American Express na Discover.
Usoro ahụ nwekwara ike inye gị ohere ịnweta mbinye aka mbinye aka $ 50,000 n'ime otu ụbọchị (dabere na nkwenye onye binyere ego) na,
Ego mgbazinye ego buru ibu dabere na akụ na usoro ego ma ọ bụrụ na arụ ọrụ gị amalite
N'ọtụtụ oge, anyị nwere ike ịhazi ka ndị Venture Capitalists wee kwado usoro nke ịga n'ihu ọha dabere n'echiche nke ụlọ ọrụ gị nwere ike.
Ozugbo i werela ụlọ ọrụ gị ọhaneze, ị nwere otu akwụkwọ ntụgharị aka anyị ahaziri ka anyị bulie ọkwa gị nke ọma. Enwere ndị anyị na mmekọrịta dị ogologo nke anyị ga - eji ma ọ bụ nke anyị ga - eji aka ya rụọ ọrụ nke ọma maka ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nke a bụ ndepụta nkebi
Ndị ọrụ mgbasa ozi maara ihe na-enweta nsonaazụ kacha mma na ọnụ ala kacha ala.
Ndị na-eme atụmatụ azụmahịa
Ndị na-ewe ndị ọrụ n’ọrụ
Ndị ndụmọdụ maka ahia
Ndị ọkachamara na-ahụ maka njikwa
Ọkachamara na jikọrọ ọnụ na nnweta
Ndị ahụ ga - enyere gị aka ịmalite azụmahịa azụmaahịa na ụlọ ọrụ S&P 500
Anyị abụrụla azụmaahịa kemgbe afọ 100
Ahụmịị gụta ọnụ. Publicga ọha bụ usoro ahaziri nke ọma. Yabụ, ịchọrọ dabere na ndị na-enyere gị aka. Ọ dị mkpa inwe obi ike na ha maara nnweta na nke dị n'ime usoro ahụ site na ahụmịhe buru ibu. Ndị otu anyị na-arụ ọrụ nke ọma na arụ ọrụ n'ime mkpokọta nke iwu nche ma mee ụzọ dị mma maka ịchụ ọsọ na nke ịga nke ọma.
Nke a bụ ụfọdụ uru maka onye kpebiri ịga n'ihu ọha:
Ọkpụkọ na elu mmiri
Na-eme ka uru nke azụmahịa ahụ dịkwuo ukwuu.
Ọ dị mfe iji bulie isi obodo mgbe ị nwere ụlọ ọrụ ọhaneze.
Nwere ike iji ngwaahịa ịkwụ ụgwọ maka ọrụ dị ka mgbasa ozi, ịkwalite ngwaahịa, ndị ọzọ
ọrụ na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ihe kachasị dị mfe iji nweta ụlọ ọrụ ndị ọzọ - site na iji ngwaahịa ụlọ ọrụ zụrụ ụlọ ọrụ.
Akụkọ Banyere Publicga Ọha
Eringchụ Ọhaneze Direct (DPO) nwere ike inwe nnukwu uru karịa IPO. Site na IPO, mmadụ aghaghi ikwuputa ego ụlọ ọrụ ahụ ga-ewelite site n'ire òkè. Ọ bụrụ na akpọliteghị ego ahụ, onyinye agaghị ezu imecha. Agbanyeghị, na enwere DPO enweghi otu mgbochi ma enwere ike mgbanwe karịa n'ihi na achọghị ka bulie ego nke isi obodo ị na-enye n’onyinye ịchọrọ ka ị bụrụ na IPO.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ma ọ bụ na-eche echiche ịga n'ihu ọha, ma chọọ ịmatakwu otu esi edebanye aha maka SEC, gụnyere mgbasa ozi ọha ma ọ bụ ntụgharị nke mejupụtara, mezue mpempe akwụkwọ dị n'aka nri na mmadụ ga-ekwurịrị gị nke a. Anyị nwere ike ịhụ ole ịchọrọ yana yana mgbe ịchọrọ ịmalite ịmalite obodo. Jụọ otu esi aga n'ihu ọha ma na-ajụ ajụjụ banyere njikọ jikọtara ọnụ. Enyemaka dị na ebe ncheta ndenye nkeonwe (PPM) yana
inweta isi ego, isi mmalite, ndị na - azụ ahịa, ụlọ ọrụ shei na otu esi ewere ụlọ ọrụ gị n'ihu ọha. Enwetakwa ozi banyere otu esi eweli isi obodo dị ka ụlọ ọrụ ọha na eze na usoro iwu.
Mgbe emechara ọrụ ahụ dum, azụmahịa gị nwere ike ihu ọha ma azụmahịa gị ga-esi otú a bụrụ ụlọ ọrụ ọha. Anyị na-ejide gị n’aka ma jiri ụkwụ na-aga gị site na usoro mgbochi site na usoro nke ịbụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ọha. Ndị ọrụ nkwado anyị nke ndị ọkachamara nwekwara ike idowe gị emelitere maka otu esi eme mwekọrịta na ụlọ ọrụ shei ọha na-ere n'ihu ọha. Otu ga-eme ọhaneze site na njikọta azụmahịa na ụlọ ọrụ shei ọha. Ndi DPO, odi ka odi nma kari otutu mmadu.
Gaa n'ihu ọha na Mmepe Kwesịrị Ekwesị na Mmekọrịta Investor
Mmekọrịta ndị na-etinye ego kwesịrị ekwesị nwere ebumnuche uru, ebumnobi iwu, na ebumnuche nke udo. Yabụ, ụlọ ọrụ anyị nwere ike inyere gị aka ka gị na ndị na-etinye ego kwurịtara nke ọma ma kwalite ngwaahịa ahụ. N'adịghị ka ụlọ ọrụ onwe, ụlọ ọrụ ọha na-ahụ maka ọrụ nwere ike ịkpọsa ndị otu n'ihu ọha na-enye onyinye ọha.
Anyị na ụlọ ọrụ ọha anyị nwere ike inyere gị aka ị bulie isi ma bulie isi ego maka azụmahịa gị chọrọ ngwa ngwa na iwu.
Anyị nwere ike inyere gị aka ịkwalite azụmahịa gị na ndị na-ege ntị buru ibu karịa ka ị nwetụrụ.
Nwere ike ahia ngwaahịa maka ọrụ mgbasa ozi. Mgbe ahụ ị nwere ike iji mgbasa ozi a kachasị akwụ ụgwọ ma jiri ya mee ka ụwa niile mara na ị bụ ụlọ ọrụ ọha. Otutu ndi mmadu ga - amata banyere gi ka ndi mmadu ga - azuta n’aka gi. Nke a ga - enyere gị aka ịchụso ego maka na --enwekwu ego ga - ama na ngwaahịa ụlọ ọrụ gị dị maka azụmaahịa.
Usoro Ọha Na-aga
Otutu ndi mmadu amaghi ka esi aga n’ihu ọha. Yabụ, anyị na-eme ka ọ dị mfe. Nkebi ahịrịokwu ndị dị ka onyinye ihu ọha n'ihu, onyinye ihu ọha mbụ bụ ndị amaara ama ole na ole maara nkọwa nke otu esi aga ebe ahụ. Gini bu onye n’acho ahia? Kedu otu ị ga - esi kacha mma ịme njikọ jikọrọ ọnụ? Welie isi obodo? Mepụta ụlọ ọrụ shei ọha? Ajụjụ ndị ahụ bụ azịza anyị, ndị a bụ ọrụ enwere ike ịnye gị mgbe ị kpọchara.
Otu n'ime ụzọ izizi na-emejupụta akwụkwọ ndebanye aha S-1 ma kpoo ya na
Ihe nchekwa na Commission Commission (SEC). Ozugbo ha kwenyeere ịgba akwụkwọ ahụ, a na-etinye akwụkwọ na FINRA, Industrylọ Ọrụ Njikwa Ego Ego. Mkpa ihe na usoro na usoro IPO na DPO ga-edozi ya na usoro aka ọrụ yana usoro njikọta nke shei ọha, na-achịkwa Mkpo 15c211 ma mepụta 8-K. EDGAR, nke na-anọchi anya nchịkọta data, nchịkọta, na mkpopụta elektrọnik wee mezue nke ọma ka ewepụta ụlọ ọrụ shei ọha, njikọ dị n'akụkụ na-eme nke ọma yana isi mmalite ma ọ bụ ego mmepe na-ewulite nke ọma.
Dịka anyị kwurula na mbụ n’edemede ahụ, ụzọ kachasị mma na-abụkarị DPO (Direct Public Offing). Kpọtụrụ ma anyị nwere ike ịnye gị ụfọdụ ozi n'efu na isiokwu a yana otu esi eme njikọ njikọta na ụlọ ọrụ shei ọha. Ya mere, ị ga - amụta otu esi ewere ụlọ ọrụ gị n'ihu ọha na - enweghị mmefu ọdịnala. Ọzọkwa, ị nwere ike ịnweta ndụmọdụ banyere otu esi ewere ụlọ ọrụ gị n'ihu ọha yana ihe kpatara o ji dị mfe iji bulie isi obodo site na iji ụlọ ọrụ ọha na-adịghị ka nke onwe.
Otingkwalite ngwaahịa gị - ọ dịghị ihe dị mma karịa ezigbo akụkọ
Ezigbo IPO bụ maka ire akụkọ gị. N'ụzọ bụ isi, ire ahịa na-adịkarị mma
ịkọ akụkọ, ị kwenyeghị? Otu n'ime ihe mbụ ị ga - eme bụ ịrụ ọrụ ụbọchị ole na ole. Ndị ọzọ na-agba ya. Nke ozo, karie iwere banyere otu echiche ochie a, gagharia akuko gi. Ndị mmadụ na-eji mmụọ azụta ma jiri ezi uche mee mkpebi ziri ezi. Jide n'aka na ị ga-etinye ma ezi uche dị na ya nke na-eme ka uche na ihe mgbu mmetụta uche nke na-eme ka ụmụ irighiri ihe ntinye aka na-agagharị. Kọọ akụkọ ga-eme ka ndị mmadụ na-akparịta ụka.
Akụkọ kacha mma
Enwere n'ezie naanị otu akụkọ ị ga-agwa otu ndị nwere ike isi nweta IPO: Kedu ka ụlọ ọrụ gị ga - esi mee ka ha nwekwuo ego karịa onye na - esote? Imirikiti ndị isi ụlọ ọrụ na ọtụtụ ndị otu bọọdụ na-eji enyere ndị ahịa aka. Mana, buru n’uche, na ihe dị mkpa maka ndị ahịa ịmara na ihe onye chọrọ itinye ego chọrọ ịmata na-adịkarị iche. Yabụ, na mgbakwunye na ikwu maka ngwaahịa gị na ihe ị ga - eme ha, mgbe gị na ndị na - etinye ego na - ekwu maka ROI ha.
Write Dee Akụkọ Ahụ
Can nwere ike ịnwe enyemaka, mana n'ikpeazụ, ọ bụ gị ga-ederịrị akụkọ ahụ. Nke a bụ ọrụ CEO ma ọ bụ CFO. Iji kwughachi, ndị mmadụ na-eji mmụọ azụta ma jiri ezi uche zụta ịzụta ihe. Yabụ, ọ bụrụ na akụkọ ahụ nwere ezi uche ma si gị n'obi, yabụ nwere ihe ọ pụtara nye gị, ndị na-ege gị ntị ga-achọpụta nke a, enwere ike ịkwali mmetụta ha ime, ma nwee ike igosipụta mkpebi ha n'ụzọ dị mfe.
Anyị so ụlọ ọrụ abụọ nke nọ na ụlọ ọrụ dị elu rụkọrọ ọrụ. Otu n’ime ndị isi ala gbara mmanụ n’etiti abalị na-edozi ihe ngosi bara uru na nke sitere n’obi. Onye isi nke ụlọ ọrụ ọzọ nwere ndị mmadụ na-ere ahịa na-egosi ihe ngosi ahụ. A na-eweta onyinye ndị ahụ ma were ọnụ ahịa otu ụbọchị iche. Nke izizi, ebe Onye isi ala tụkwasara obi ya na ngosi ahụ, gafere ihe dị elu ọnụego ya. Nke abụọ nọrọ na ala. Enwere ezigbo ihe kpatara nke a.
Ọ bụrụ n’inweela ihe ngosi mbụ dị na TV ihe nkiri “American Idol,” ebe ndị ikpe hụrụ otu onye na-abụ abụ n’iru onye ọzọ, ị hụla na Simon Cowell na-asọ asọ mgbe onye aga-agba na-eyi uwe ejiji ma ọ bụ na-eji ọtụ ọzọ. Ha na-achọ nkà abụghị hype.
Ndị na-achụ ego n’ụlọ ọrụ bụ otu ihe. Ha nwere ike ịhụ atụmatụ ego ọhụụ ise ruo iri kwa izu. Ha ahụchaala ya. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị ha ghọrọ ndị na-enweghị atụ na ndị nwere obi abụọ ma ọ dị mkpa idozi ọtụtụ okwute na-abaghị uru iji chọta obere arụmọrụ ọla edo. Phony hyperbole anaghị enyere aka. Igodo a bụ n’ime nkeji ole na ole ị ga-ekwu okwu gị. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọtụtụ ga-eme mkpebi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ dị mkpa bụ nkeji ikpeazụ nke 10-15 n'oge oge ajụjụ na azịza. Ndị ahụ na-etinye ego chọrọ ịhụ ka ị jigidere mgbe a na-agbagha echiche gị siri ike.
Lee ajụjụ a na-ajụ onye isi ọ bụla n'okporo ụzọ: “Kedu nke kasịnụ
challengezọ ọ bụla, “gịnị na-egbochi gị n'abalị?” Thezọ kacha mma ị ga-esi zaghachi bụ ikwupụta ihe na-echegbu gị, meekwa ka ndị na-ege ntị mara ihe ị na-eme iji dozie nsogbu ndị ahụ.
Ngosipụta gị na-abụkarị nkeji 45. Nke ahụ bụ ihe niile ị nwere. Ya mere, tụpụ bọmbụ ahụ ma nye ha ihe kachasị mma gị n'ime nkeji atọ mbụ. Nke ahụ ga - eme ka ha chọọ ịnọdụ ala ma lebara anya n'oge 42 na - esote. Kedu ihe mere ị ji dị iche?
Nke a bụ ezigbo ihe atụ. Onye isi nke otu ụlọ ọrụ mepụtara igwe nhicha ọcha na-agwa otu ndị nwere ike isi tinye ego n'okwu a: "Ka m bido n'okwu ya, Ajụjụ ole ndị dị ebe a kpochara ala?" Onye ọ bụla weliri aka ha. Ole n'ime unu huru ime ya? “Dị ka gị onwe gị, enwere nde kwuru nde mmadụ n'ụwa niile na-enweghị mmasị ihicha ala ha. ABC Robotics nwere ngwaahịa iji dozie nsogbu ahụ. ”
Anyị nwere ike ịnyere gị aka kachasị ọhụrụ gbasara usoro IPO (Mmemme Onweta Ọha n'ihu ọha), jikọtara njikọ, Iwu 15c211, Iwu D, ịga n'ihu ọha na shells ọha. Na mgbakwunye, kpọtụrụ anyị maka ozi na Memorandums Nkeonwe (PPM), Rule 504, Rule 506, na-ebuli isi obodo na mbido mbido, nchedo akụ site na ikpe, yana usoro ụlọ ọrụ ọhụrụ na US na mba ọzọ.
Ọ nwere nka. Capitalzụlite isi obodo nwere ike ịbụ ihe ị na-akpata. Anyị nwere maapụ. Mụta ihe na-eme ma ụlọ ọrụ gaa n'ihu ọha ma hụ otu ọ nwere ike isi nyere gị aka.
Will ga-amatakwu banyere otu ụlọ ọrụ si aga n'ihu ọha ma nwee ahụ iru ala ịme mkpebi dị mma maka gị. Yabụ, maka ozi ndị ọzọ na nkọwapụta yana usoro iji merie njikọta azụ, njikọta ọha shei ma ọ bụ inye ihu ọha (DPO), kpọọ nọmba ahụ dị n'elu peeji a. Dị ka o kwesịrị, enweghị ozi ọ bụla dị na nke a bụ nke a ga-atụle dịka iwu, ụtụ ma ọ bụ ndụmọdụ ọkachamara ọzọ. Ọ bụrụ na achọrọ ihe dị otú ahụ, achọrọ ọrụ nke ọka iwu ikikere na / ma ọ bụ onye ọrụ akaụntụ.
Mgbe ị dịla njikere ịga n’ihu ọha, kpọtụrụ anyị. Anyị anọwo na-arụ ọrụ kemgbe 1906 ma mara anyị n'ụwa niile dị ka ndị isi na nhazi ụlọ ọrụ na ịga n'ihu ọha.